Nei iPhone Yangu Ichiti Inotsvaga? Heino Kugadzirisa! - Iphone
kurema kwetambo yehuni
maapplication asiri ekuvandudza pane iphone
yangu iphone skrini yakatonhora uye handigoni kuidzima
iphone 6s yakagwamba paaple logo
Nei iPhone Yangu Ichiti Inotsvaga? Heino Kugadzirisa!
Iwo mabara echiratidzo kumusoro-kuruboshwe ruoko kona ye iPhone yako akatsiviwa ne 'Kutsvaga ...', asi munhu akamira padivi pako arikutaura dutu. Kanyanga kaputswa here? Kwete hazvo. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone ichiti kutsvaga uye maitiro ekuongorora uye kugadzirisa dambudziko .
Nei iPhone Yako Ichiti 'Kutsvaga…'
Kana vangoona 'Kutsvaga ...', vanhu vazhinji vanofunga iyo yakavakirwa-mukati kanyanga pane yavo iPhone yaputswa uye vanonanga vakananga kuApple Chitoro.
Kunyange chiri chokwadi kuti chakaremara chemukati kanyanga unokwanisa kukonzera iyo iPhone yekutsvaga dambudziko, hazvitomboiti iyo chete kukonzera. Ngatitangei pano:
Sei iphone yangu isingatumire mafoto kuemail yangu?
Kana iwe ukapwanya yako iPhone kune smithereens kana kuidonhedza muchimbuzi, pane mukana wakanaka kuti yemukati kanyanga yatyoka uye yako iPhone inoda kugadziriswa. (Asi zvakadaro tarisa matanho ekugadzirisa matambudziko muchinyorwa chino.)
Kana yako iPhone kanyanga yakangoerekana yamira kushanda pasina kupindira kwepanyama, pane mukana wakanaka wekuti dambudziko re software iri kukonzera yako iPhone kuti iti 'Kutsvaga ...', uye iwe unogona kukwanisa kugadzirisa dambudziko iwe pachako.
Kunyange chiri chokwadi kuti yako iPhone kanyanga ndiyo inotsvaga masero eshongwe, software matambudziko anogona kukanganisa kuti yako iPhone inotaura kune yakavakirwa-mukati kanyanga , uye izvo zvinogona kukonzera yako iPhone kuti 'Kutsvaga ...'.
Maitiro Ekugadzirisa An iPhone Iyo Inoti Kutsvaga
Ini ndichafamba iwe nenzira yekugadzirisa matambudziko iPhone inoti 'Kutsvaga ...', uye ikubatsire kugadzirisa dambudziko, kana unokwanisa gadziriswa pamba. Ini ndinoronga zvinyorwa zvangu nezvakareruka kutanga, uye tobva taenderera kumberi kune zvakaomarara zvinogadzirisa kana uye pazvinenge zvave kudikanwa. Kana tikaziva ipapo chaizvo ndizvo dambudziko rehardware ne iPhone yako, ini ndichatsanangura dzimwe sarudzo dzakanaka dzekuwana rubatsiro kubva kune zvayakanakira.
1.Dzorera yako iPhone Kubva uye Kudzoka PaZvezve
Iyo yakapusa kugadzirisa, asi kudzima yako iPhone kure uye kudzokerazve zvakare yave nzira yakaedzwa-uye-yechokwadi yekugadzirisa zvakakosha iPhone matambudziko kubvira, hazvo, zvachose. Izvo zvehunyanzvi zvikonzero nei kudzima yako iPhone kudzima uye kumashure kunogona kubatsira hazvidiwe kuti unzwisise.
Zvakaringana kutaura kuti akawanda madiki mapurogiramu ausingaone achimhanya nguva dzose kumashure kwe iPhone yako inoita zvese kubva kudzora wachi kusvika (iwe wakazvifungidzira) ichibatanidza kune masero eshongwe. Kudzima yako iPhone inovhara pasi ese madiki mapurogiramu uye kuvamanikidza kuti vatange kutsva. Dzimwe nguva ndizvo zvese zvinotora kugadzirisa matambudziko nePhones.
Kudzima yako iPhone, tinya uye bata bhatani bhatani kudzamara 'slide kumagetsi kudzima' richioneka pachiratidziri. Kana iwe uine iPhone X kana nyowani, pinda mubatirire bhatani repadivi uye chero vhoriyamu bhatani kuti usvike iyo 'slide kumagetsi kudzima' skrini. Svetera iyo icon pane iyo skrini nemunwe wako uye mirira kuti yako iPhone ivhare.
ipad yangu skrini haina kubatidza
An iPhone inogona kutora kusvika pamasekondi makumi maviri kuti ivhare zvachose. Kudzorera yako iPhone kumashure, bata pasi bhatani remagetsi kudzamara waona iyo Apple logo ichioneka pachiratidziri.
2. Ongorora Zvirongwa Zvako Zvekutakura, Kana Uchigona
Sezvaunogona kufungidzira, zvakawanda zvinoitika kuseri kwezviitiko kuchengetedza yako iPhone yakabatana kune isina waya netiweki. Ini ndinozvitora sezvisina basa mazuva ano, asi tekinoroji iri zvinoshamisa . Sezvatinotyaira, chiratidzo chedu chemaseru chinogoneswa kubva kune imwe shongwe kuenda kune inotevera, uye mafoni anoita sekuti atiwane chero kwatiri munyika - chero bedzi maPhones edu asingataure 'Kutsvaga ...'.
Nguva nenguva, vasina waya vanotakura vanoburitsa software inogadziridza iyo inoshandura nzira iyo iPhone yako inopindirana nayo nenharembozha. Dzimwe nguva, izvi zvinogadziridza zvinogadzirisa matambudziko anogona kukonzera yako iPhone kuti iti 'Kutsvaga ...' nguva dzese. Zvinosuruvarisa, maPhones haana 'Bhatani reKutakura Zvirongwa Zvidzidzise' bhatani, nekuti izvo zvingave zvakareruka.
Maitiro Ekutarisa Kune A Anotakura Zvirongwa Kugadziridza Pane Yako iPhone
Batanidza kune Wi-Fi.
Enda ku Zvirongwa -> General -> About
Mirira masekondi gumi.
Kana inogadziridza iripo, pahwindo panozoonekwa iyo inobvunza kana iwe uchida kugadzirisa ako marongero ekutakura. Kana inogadziridza iripo, pombi Kwidziridza kana Zvakanaka . Kana pasina chinoitika, marongero ako anotakura atove nezvazvino.
3. Dzorerazve Network Zvirongwa
Zvingaite sezviri pachena, asi ini ndinowanzoona zvichibatsira kudzokorora dambudziko nekuti rinojekesa mhinduro: Iyo iPhone inoti kutsvaga haigone kubatana kune nharembozha. Zvakaipisisa zvakadaro, bhatiri rayo rinotanga kubuda nekukurumidza, nekuti iPhone inoshandisa simba rakawanda kuyedza kubatanidza kana ichifunga kuti nharembozha haina kuwanikwa. Kugadzirisa 'Kutsvaga ...' dambudziko rinowanzo gadzirisa bhatiri hupenyu nyaya naizvo.
iphone yakavharirwa mumusoro wefoni
Dzorerazve Network Zvirongwa inodzosera yako iPhone's cellular data kumisikidza kudzokera kune zvekusarudzika zvefekitori Iyo iri nyore nzira yekubvisa mukana wekuti shanduko yetsaona muZvirongwa app iri kutadzisa yako iPhone kubva kubatanidza kune network. Kugadzirisazve maratidziro enetiweki pane yako iPhone zvakare kunobvisa ese akachengetedzwa maWi-Fi maratidziro uye mapassword avo kubva ku iPhone yako, saka ita shuwa kuti unoziva yako Wi-Fi password usati waita.
Kuti umise zvakare maratidziro ekumisikidza pane yako iPhone, enda ku Zvirongwa -> General -> Reset , pombi Dzorerazve Network Zvirongwa , nyora pasipoti yako, uye tora Dzorerazve Network Zvirongwa . Mushure mokunge yako iPhone yatanga zvekare, mirira masekondi mashoma kuti uone kana dambudziko re 'Kutsvaga…' raenda. Kana zvikasadaro, enda kunhanho inotevera.
4. Gadzirisa Matambudziko Neako SIM Kadhi
Ese maPhones ane SIM diki diki iyo vatakuri vasina waya vanoshandisa kuona maPhones chaiwo pane yavo network. Yako SIM kadhi inopa yako iPhone yako nhamba yefoni - ndizvo zvinotaurira mutakuri wako ndiwe. Matambudziko eSIM kadhi chikonzero chakajairika nei maPhones achiti 'Kutsvaga ...'.
Chinyorwa changu nezve dambudziko rakafanana, chii chinoitika kana yako iPhone ikati 'Hapana SIM', inotsanangura
yangu iphone 8 skrini yakasviba
5. DFU Dzosera iPhone Yako (Asi Verenga Iyo Yambiro, Kutanga)
Yako iPhone firmware ndiko kuronga kunodzora Hardware pane yako iPhone, kusanganisira kanyanga. Inonzi firmware nekuti iyo zvinenge zvisingambochinja , kusiyana nesoftware (inochinja nguva dzese) kana Hardware (inongochinja chete kunze kwekunge iwe uchitsiva chinhu pane yako iPhone).
Kufanana nesoftware, yako iPhone's firmware inogona kukanganiswa. Kana izvozvo zvikaitika, iyo chete nzira yekugadzirisa ndeye kuita yakasarudzika mhando yeKudzorera pane yako iPhone inonzi DFU kudzoreredza. DFU inomirira Mudziyo Firmware Kwidziridzo .
Kudzorera iPhone kunodzima zvese zviri pairi uye kunodzosera software yayo kumafekitori marongero. Kazhinji, mushandisi anotsigira kumusoro kwavo iPhone kuICloud kana iTunes, anoshandisa iTunes kudzoreredza yavo iPhone, uye anoshandisa yavo iCloud kana iTunes backup kudzoreredza yavo yega data ku iPhone yavo.
Zvinetso neiyo iPhone yako firmware zvinogona kukonzera kuti yako iPhone iti 'Kutsvaga ...', uye kana pasina kukuvara kwemuviri kana kwemvura kune yako iPhone, iyo DFU kudzorera kazhinji ichagadzirisa dambudziko.
Nekudaro, (uye iyi iri hombe zvisinei), mushure mekunge iPhone yadzorera, izvo has kuzvimisikidza pachayo pane nharembozha usati waita chero chimwe chinhu. Kana iwe DFU kudzorera iPhone wako uye izvozvo hazviiti gadzirisa dambudziko, yako iPhone haizokwanise kubatanidza kune nharembozha kuti ishandise, uye hauzokwanisi kuishandisa zvachose.
ipad yangu iri kutora nguva yakareba kubhadharisa
Kana iwe uchizogadzirisa yako iPhone zvakadaro, hazvikuvadze kuyedza DFU kudzoreredza. Dzorera yako iPhone kutanga, uye wobva wateedzera rairo mune yangu chinyorwa nezve sei DFU kudzorera ane iPhone yekutora nhanho-nhanho kufamba kweichi chiitiko. Ingo rangarira izvo kana zviripo hazviiti shanda, haugone kushandisa yako iPhone.
6. Kugadzira Yako iPhone
Kana iwe wakazviita kusvika pano, iwe wabvisa mukana wekuti software dambudziko kana dambudziko neiri yako SIM kadhi SIM iri kukonzera kuti iti 'Kutsvaga ...', uye inguva yekugadzirisa yako iPhone.
Kana iwe uri pasi pewarandi uye pasina kukuvara kwemuviri kana kwemvura, kana kana uine AppleCare +, ita musangano kuGenius Bar yeApple Store yako kuti iPhone yako ishandiswe ipapo ipapo. Kana usiri padyo neApple Chitoro kana iwe uchida kusvetuka mutsetse, Apple's mail-mukugadzirisa sevhisi zvakanaka.
Kugadzirisa kunogona kudhura kana usiri pasi pewarandi, nekuti Apple haigadzirise antenna. Kana iwe ukapfuura neApple, yako yega sarudzo ndeye kutsiva yako yese iPhone.
Kana iwe uchitsvaga imwe isingadhuri imwe, tinokurudzira Pulse , in-inoda kugadziriswa kambani. Vanozotumira nyanzvi yehunyanzvi yakanangana newe, ungave uri kubasa kana kumba.
Dzimwe nguva, kuwana foni nyowani iri nani sarudzo pane kugadzirisa iyo yauinayo izvozvi. Musoro kune UpPhone kuenzanisa nharembozha yega yega kubva kune yega isina waya inotakura.
Muchikamu chino, takataura nezvekuti nei yako iPhone ichiti inotsvaga uye yakafamba kuburikidza nerondedzero yezvingaite zvigadziriso. Iyo iPhone haigone kufona kana kugamuchira nhare, kutumira mameseji, kana kuita chero chinhu chakanyanya kunaka painoti 'Kutsvaga ...'. Kana iwe uine nguva yekusiya chirevo, ndinoda kunzwa kubva kwauri nezve zvako zvakaitika ne iPhone inoti inotsvaga uye nhanho ipi yakagadzirisa dambudziko rako.